Nahitana Fitomboana ny Fidirana, ny Varotra Elektronika ary ny Fisamborana Bilaogera ao Kenya · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Janoary 2017 11:43 GMT
Ny Fikambanan'ny Bilaogera Ao Kenya (BAKE) dia fikambanan'ny vondrom-piarahamonina izay ahitana vondrona mpamorona votoaty an-tserasera ao an-toerana, ary mikatsaka ny hanome hery ny fanavaozana ao amin'io sehatra io sy hanatsara ny kalitaon'ny votoaty izay noforonina tao amin'ny Tranonkala. Tamin'ny 28 Novambra teo, namoaka ny Toetry ny Aterineto ao Kenya 2016 ny BAKE.
Novokarina ho anisan'ny fandaharana BAKE iFreedoms Kenya an'ny BAKE ny tatitra, izay azo trohana ary mampiroborobo ny zon'olombelona sy ny zon'ny fampitam-baovao an-tserasera amin'ny alalan'ny fampilaharan-tahiry, ny olan'ny tombontsoam-bahoaka, ny politikam-pidirana an-tsehatra, ny fiarovana, sy ny fampiofanana
Nitombo afa-mametraka làlan'asa ara-dalàna ihany koa ny indostria amin'ny- fampiasana mpanoratra miasa raikitra. Manana mpiasa raikitra ireo sehatra tahaka ny HapaKenya, Techweez, Tuko, Ghafla! ary ny Soko Directory ao amin'ireo olona omeny karama.
Ohatra iray amin'ny fitomboan'ny toekarena nomerika ao Kenya ny fahazoana ny bilaogy fifosana Ghafla! an'ny Ringier, vondrona fampitam-baovao any Soisa ahitana karazam-pamoronana maroloko manan-danja isan-karazany.
Novokarina niaraka tamin'ny fanohanana avy amin'ny fikambanana, anisan'izany ny Internews Network, ny HIVOS ary ny Article 19 ny tatitra nataon'ny BAKE.
Vakio ato ny tatitra feno avy amin'ny Fikambanan'ny Bilaogera ao Kenya